ONIVERSITE ETO MADAGASIKARA : Nampitomboina ny hafainganam-pandehan’ny “internet”
Isan’ireo firenena nanaiky nandray sy nampihatra ny rafitra LMD (Licence, Master, Doctorat) i Madagasikara. Io rafitra io anefa dia mitaky fampiasana aterineto (internet) haingam-pandeha sy matanjaka mba hahafahan’ny mpianatra mpikaroka manao ny asa fikarohany. 15 mai 2019
Raha ny eto Madagasikara no jerena dia tsy mifanaraka amin’ny zava-misy sy ny fari-piainan’ireo mpianatra amin’izao vanim-potoanan’ny fanatontoloana izao intsony ny fitaovana ampiasaina ka zary lasa sakana amin’ny fidirana amin’ity rafitra Lmd ity ny fampiasana io aterineto tsy mifanaraka amin’ny filana io. Noho izany indrindra dia nanambara ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny Profesora Madeleine Félicité Rejo Fienena, omaly maraina fa hapetraka manerana ny oniversitem-panjakana rehetra manerana an’i Madagasikara manomboka izao ny fahafahana mahazo “internet” haingam-pandeha hanampiana ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ary ny mpianatra mpikaroka.
“Zavatra irian’ny mpianatra ny fahafahany mahazo ny “internet” ampy dia ampy ka noho izay dia tsy maintsy niezaka izahay ao amin’ny minisitera nametraka lamin’asa hahafahana mampitombo ny hafainganam-pandehan’ny “internet” ho an’ny mpianatra”. “Fantatsika tsara fa izany rafitra Lmd izany dia ny 30 isan-jato ihany no omen’ny mpampianatra fa ny 70 isan-jato kosa dia karohin’ny mpianatra”, hoy ny minisitry ny fampianarana ambony, nanazava ny maha zava-dehibe ny fampitomboana ny tanjaky ny “internet” tokony hositrahan’ny mpianatra. Nandritra io fampahafantarana, omaly io dia nisy ny fampisehoana sy fisedrana ny tanjaky ny “internet” nomena hositrahan’ny mpianatra sy ny mpikaroka ka niara-niaiky ny rehetra fa azo antoka tokoa ny hafainganam-pandehany. “Amiko dia ity no dingana iray lehibe hahafahantsika manatsara ny kalitaon’ny fampianarana”, hoy hatrany ny profesora Rejo Fienena nanaporofo ity dingana goavana vitan’ny minisitera ity.
Hosaziana mafy ireo mampiasa diplaoma hosoka
Nandritra io omaly io ihany koa dia mbola nanamafy ny teny izay efa nolazainy tany Toliara tamin’ny herinandro lasa teo ny minisitra fa ho hentitra izy ary tsy handefitra mihitsy mahakasika ny fampiasana na famoahana diplaoma hosoka. “Hiroso amin’ny fanaovana fanadihadiana anatiny ny minisitera ary tsy handefitra mihitsy raha mahatratra diplaoma hosoka fa hanasazy ireo tompon’andraikitra amin’izany”. “Tsy manana toerana ao anatin’ny fampianarana ny olona misandoka na mampiasa diplaoma hosoka ary izay zavatra izay dia mbola hamafisina hatrany fa tsy maintsy hisy ny fanadihadiana anatiny manerana ny oniversitem-panjakana rehetra mahakasika io diplaoma hosoka io”, hoy hatrany ny minisitra.